नीता र हरिहरको सम्बन्ध दोस्ती-यारी कि प्रेम ? – eSidhakura
मुख्य पृष्ठअन्तर्वार्ता ग्लामोर फोटो फिचर मनोरञ्जन सिनेमानीता र हरिहरको सम्बन्ध दोस्ती-यारी कि प्रेम ?
काठमाडौं- युवा ज्योतिष तथा अभिनेता हरिहर अधिकारी र अभिनेत्री नीता ढुंगानाको सम्बन्धबारे गत वर्षदेखि नै सामाजिक सञ्जालमा चर्चा चल्दै आएको छ। केही समय सेलाए झैं देखिएको उनीहरूको सम्बन्धबारे भ्यालेन्टाइनकै महिनामा चर्चा बढेको छ। उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा एक-अर्काको फोटो सेयर गरेपछि उनीहरू प्रति चासो बढेको हो। यसो हेर्ने हो भने थुप्रै सेलिब्रेटीहरू छन् जो आफ्नो प्रेम सम्बन्ध सामाजिक सञ्जालमा खुलाउन चाहिरहेका छैनन्। नीताले भने गत आइतबार हरिहरको जन्मदिनमा फेसबुकमा दुई जनाको फोटो सेयर गर्दै शुभकामना व्यक्त गरेकी थिइन्।
उनले क्याप्सनमा लेखेकी थिइन्, ‘ह्याप्पी बर्थडे जी।’ सँगै उनले केक, गिफ्ट, बैलुन र रातो मुटुको इमोजी प्रयोग गर्दै ह्यासट्याग अधिकारी हरिहर लेखेकी छन्। नीताले पोस्ट गरेको फोटोमा दुवैजना खुलेर हाँसेका देखिन्छन्। फोटो र क्याप्सनलाई लिएर फेसबुक प्रयोगकर्ताहरूले थुप्रै कमेन्ट गरेका छन्। जसमध्ये धेरैको ध्यान भ्यालेन्टाइन डेको दिन हरिहरको जन्मदिन पर्नु र नीताले हरिहरलाई सम्बोधन गर्दा ‘जी’ लगाउनुमा परेको छ। नीता फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय अभिनेत्रीमध्ये पर्छिन्। नीताले हरिहरको जन्मदिनमा पोस्ट गर्नु त भइहाल्यो।
तर हालैमात्र हरिहरले पनि आफ्नो फेसबुक पेजबाट उनको र नीताको फोटो सेयर गरेका छन्। कुनै उत्सवबिना नीतासँगको फोटो हरिहरले एउटा इमोजी मात्र क्याप्सन हालेर सेयर गरेका हुन्। हरिहरको पोस्टमा धेरैले ‘राम्रो जोडी’, ‘एक अर्कालाई बनेका’ जस्ता प्रेमिल कमेन्ट गरेका छन्। यस्ता कमेन्टहरूमा नीता र हरिहर दुवै मौन छन्। उनीहरूले अझै कमेन्टहरूमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। उनीहरूको मौनताले एक-अर्काको प्रेम सम्बन्ध स्वीकारेको हो कि भन्ने संकेत दिएको छ। स्रोतका अनुसार नीता र हरिहर करिब डेढ वर्षको प्रेम सम्बन्धमा छन्।
हरिहरसँग नजिकिएपछि नीता आध्यात्मिक कुरामा पनि आकर्षित भएको धेरैले अड्कल लगाएका छन्। हरिहर र नीता कसैले पनि आफूहरू प्रेम सम्बन्धमा रहेको भने खुलाएका छैनन्। उनीहरूले आफूहरू राम्रो साथी मात्र भएको बताउँदै आएका छन्। ‘हामी दोस्ती-यारीको सम्बन्धमा छौं,’ नीताले हरेक पटकको अन्तर्वार्तामा यसै भन्ने गरेकी छन्। तर यस पटक उनको प्रस्तुति हेर्दा हरिहर उनका साथीभन्दा माथि हुन् कि!